सल्यानका यातायात ब्यबसायी समितिको दादागिरीले यात्रुहरु बिचल्लीमा, प्रहरी बने मुख दर्शक ! « Postpati – News For All
सल्यानका यातायात ब्यबसायी समितिको दादागिरीले यात्रुहरु बिचल्लीमा, प्रहरी बने मुख दर्शक !
कार्तिक २८, सल्यान । दाङबाट सल्यान हुँदै रुकुम, जाजरकोट र पश्चिम रोल्पाका लागि चल्ने रोडमा यातायात व्यबसायी समितिको दादागिरीले यात्रुहरु सास्ती भोग्दै आएका छन् । उक्त रोडमा यातायता व्यवसायीहरु मिलेर एकाअधिकार जमाउदा सल्यान रोड भएर आवतजावत गर्ने यात्रुहरुले गाडी नपाउदा मारमा परेका हुन् ।
राप्ती सार्बजनिक यातायात ब्यवसायी समिति, सल्यान रुकुम यातायात ब्यवसायी समिति, शारदा यातायात प्रा.लि, सिस्ने हिमाल यातायात ब्यवसायि समिती, नमस्ते राप्ती यातायात प्रा.लि लगायतका यातायात व्यबसायीहरुले सल्यान, दाङ, रुकुम, जाजरकोट र पश्चिम रोल्पा चल्ने रोडमा केहि दिन अघि क्यु मिलान गरि गाडी संचालन गर्ने सहमती गरेपछि यात्रुहरु बिचल्लीमा परेका हुन् ।
यात्रुलाई आरामदायी र सुरक्षित यात्रा गराउँछौँ भन्ने नारा घन्काउँदै खुलेका नयाँ प्रालिहरु पुरानै समिती संग मिलेर क्यु मिलाउन थालेपछि यात्रुहरुलाई झन समस्या भएको हो ।
अहिले सल्यान हुँदै चल्ने प्राय सबै सडकका गाडीहरुमा यात्रुहरुलाई कोचेर यात्रा गराईदै छ । क्यु सहमतीले दुईओटा गाडीमा बस्ने यात्रुहरु एउटै गाडीमा कोचेर यात्रा गर्न बाध्य बनाइएको छ । अझ यो समस्या चाडपर्वमा धेरै देखिएको छ ।
रोल्पाको सुकाओडारबाट झ्याम हुँदै सल्यानको दमाचौर, मोख्ला भएर दाङ जाने बसमा सिटको कुरा त छोडौँ कोचिएर उभिएर यात्रा गर्ने ठाउँ समेत नपाएर यात्रुहरु बिचल्ली परेका छन् । यो रुडमा पहिले ३ ओटा गाडी नियमीत संचालनमा थिए तर भर्खरै यातायात व्यबसायीको क्यु सहमतीले यो रुडमा एउटा मात्रै गाडी संचानलनमा आएकोे छ । जसले गर्दा यात्रुहरुले सिट नपाउदा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने सास्ती खेप्नु परेको यात्रु गोपाल चन्दले बताए ।
यस्तै समस्या छ रोल्पाको पाखापानीबाट सल्यानको पातिहाल्न, कोटमौला, बागचौर हुँदै दाङ जाने गाडीमा पनि ! यो रुटमा पनि पहिले ३ ओटा गाडी नियमीत संचालनमा थिए । तर अहिले यहाँ पनि एउटा मात्रै गाडी संचालनमा छ ।
यी त सानो उदाहरण मात्रै हुन् । बाफुखोलाबाट कोटबारा, खरिबोट हुँदै दाङ जाने गाडीमा त्यस्तै समस्या छ । रुकुमबाट सल्यान हुँदै दाङ जाने गाडीमा झनै समस्या देखिएको छ । रुकुमबाटै गाडी फुल भएर आउने बिच बाटोमा गाडी नरोक्दा बिच बाटोका यात्रुहरु थप समस्या र बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।
सोमबार मोख्लाबाट श्रीनगर आउने यात्रु टंक केसीले फोन गर्दै भने– “म दिउँसो १ बजेदेखि सडकमा गाडी कुरिरहेको छु अहिले ५ बजिसक्यो, सबै गाडी उतैबाट प्याक भएर आउँछन्, कुनै पनि गाडी रोक्दैन् ।”
यस्तै समस्या छ पातिहाल्नबाट दाङ जाने तिर्था मगरको समस्या पनि ! उनको सामान धेरै भएकै कारणले गाडी चालकले गाडीमा नराखेर गाडी कुदाए । उनले भनिन्– “मेरो सामान अलिकती धेरै भएको कारण ड्राइभरले बस नरोकेरै कुदायो, म बिचमा अलपत्र परे, अब भोलि जानुपर्ला ।”
त्यसैगरी झ्यामबाटदाङ जान यात्रा गरिरहेका गोपाल चन्दले भने यात्रुहरुलाई भेडाबाख्रा झैँ कोचेर राख्ने काम भएको छ, जसको कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न ब्याध्य भएका छन् ।
दमाचौरबाट दाङ पुगेर काठमाण्डौँ जाने दमाचौरका तिलक ओली समयमै दाङ गाडी नपुग्दा काठमाण्डौँका लागी टिकट काटेको पैसा गुमेको दुखेसो सुनाउछन् । उनले भने– “मैले काठमाण्डौँ जाने भनेर दाङमा साथीलाई टिकट काट्न लगाएको थिए, तर यहाँबाट गाडी समयमा दाङ नपुग्दा मेरो पैसा पनि गुम्यो, गाडी पनि छुट्यो ।”
यसरी यातायात व्यवसायीको दादागीरीले बेलाबेला यात्रुहरु समस्यामा मात्रै नभएर जोखिम पुर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । समयमा पुग्ने गाडी समयमा नपुग्नाले यात्रुहरु मर्कामा पनि परेका छन् ।
यातायात ब्यबसायी समिति यस्तो भन्छ…!
सल्यानको सबैभन्दा ठुलो यातायात समिती सल्यान रुकुम यातायात व्यबसायी समितीका महासचिव अर्विन्द कुमार राईले गाडीको संख्या कम भएकोले यात्रुको चापअनुसार डबल गाडी संचालन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
उनले भने सबै यातायातले सहमती गर्दा आफुहरुले पनि सहमती गरेको र आफुहरु सँग धेरै गाडी नभएको जवाफ दिएका छन् ।
उनले छिट्टै नयाँ गाडी थपेर जिल्ला भित्र गाडीको संख्या बृद्ध गर्ने बताए । ४ ओटै जिल्लामा क्युको सहमती भएकोले आफुले छुट्टै गाडी थप गरि सल्यान दाङ गाडी पठाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
तर उनीहरु (यातायात ब्यबसायी) को यस अघिको सहमतिलाई हेर्दा गाडी अपुगका कारण भन्दा पनि यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेकोले ब्यबस्थित गर्न क्यु मिलान गरेको बताएका थिए ।
ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक
सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम रोल्पा पुग्ने रोडमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको गतिलो निरक्षण र अनुगमन नगर्दा यातायात ब्यबसायी तथा गाडी संचालकहरुले यसको फाइदा उठाई रहेको यात्रुहरुको गुनासो छ ।
यात्रु गोपाल चन्दले भने जब ट्राफिक पोष्ट आउछ तव कोचिएका यात्रुहरुलाई ओरालेर पोष्ट पार गर्न हिड्न लगाउछन र ट्राफिक प्रहरीले यस्तो कुरा थाहा पाएर पनि नथाहा पाए झैँ गरि मुक दर्शक बन्ने गर्छन ।
सल्यानका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञानेन्द्र शर्मा गाडीको व्यवस्थापनको लागी बुझ्दा प्रहरीलाई सडकमा खटाएको बताए । उनले गाडीमा यात्रुको चापलाई कन्टोल गर्न प्रहरी खटाएको बताए पनि यात्रुहरुले यस्तो समस्या निरन्तर भोग्दै आएका छन् ।
उनले आफुले देखेसम्म सल्यानमा कुनै गाडी एस्ट्रा नबसेको पनि बताएका छन्। चाडपर्वको समय भएकाले यात्रुको चाप धेरै भएको र गाडीको संख्या कम भएको उनले बताएका छन् । गाडीमा कम यात्रु राख्न खोजेपनि यात्रुको चापले गाडी प्याक हुने उनको भनाई छ ।
तर यस अघि ३ वटा बस चल्ने रोडमा क्यु मिलान गरेर १ वटा बस मात्र हाल्दा अझ थप समस्या पैदा भएको यात्रुहरुको गुनासो छ ।
रोल्पा र सल्यानको सिमाना पर्ने झ्यामको यो सुरक्षा कर्मी सहितको दृश्य हेर्न सकिन्छ । सडकमा खटेका प्रहरीहरु मुख दर्शक बनेका छन्, जब कि त्यहाँ यात्रुहरु कोचिदै गाडी भरिदै छ । सर्वसाधारणले प्रहरी संग गुनासो पोख्दा गाडीवाला संग कुरा कानी गरे झैँ गरे तर एकछिनपछि यात्रु कोचिएको गाडी सहजै छोडी दिए ।
यातायात समिति बीच यस्तो थियो सहमति !
दाङ, सल्यान,रुकुम र जाजरकोटमा चल्ने यात्रुवाहक यातायात समितीहरुले यस अघि क्युमा मिलेर गाडिहरु संचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । पहिले आ-आफ्नै ढंगले गाडी संचालन गर्दै आएका उनिहरुले अबदेखि क्यु मिलाएर आलोपालो गाडी संचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यात्रुमुखी सेवा दिन नसकिने भन्दै कार्तिक ११ गते आइतबार दाङको तुलसीपुरमा बसेको यातायात ब्यवसायी समिती र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे थियो । पछिल्लो समयमा धेरै यातायात ब्यवसायी समिती र प्रा.लिहरु संचालनमा आएपछि यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको ठहर गरेको थियो ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सगठनका तुलसीपुर उपमहानगर कमिटि अध्यक्ष केशव राज भण्डारी अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्तिक १२ गते सोमबार देखि लागू हुने गरि उक्त सहमति गरिएको थियो ।
राप्ती सार्बजनिक यातायात ब्यवसायी समिति, सल्यान रुकुम यातायात ब्यवसायी समिति र शारदा यातायात प्रा.लिका गाडीहरुको सहकार्य रहेको छ भने सिस्ने हिमाल यातायात ब्यवसायि समिती र नमस्ते राप्ती यातायात प्रा.लिहरु बीच क्युमा संचालन हुने सहमति भएको थियो ।
तस्विर : गाेपाल चन्द/पोष्टपाटी